musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Geneva kuenda kuNew York ndege paSWISS neUnited Airlines izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Geneva kuenda kuNew York ndege paSWISS neUnited Airlines izvozvi.
Kune pent-up kudiwa kwekufamba kuenda kuSwitzerland kubva kuUnited States, uye idzi inhau dzinogamuchirwa kune vese vafambi nevafambi vebhizinesi.
SWISS ichashanda nendege dzinosvika ina pasvondo kuenda kuNew York's JFK kubva Zvita 14, 2021.
United Airlines ichatangazve ndege dzeNewark-Geneva muna Mbudzi 1, 2021, nendege ina pasvondo.
United Airlines uye SWISS vanobatana pamwe chete uye nhengo dzeStar Alliance.
SWISS International Air Lines, mutakuri wemureza wenyika yeSwitzerland, akazivisa kuti achatangazve kufamba nendege pakati peGeneva Airport (GVA) neNew York John F. Kennedy International Airport (JFK) mumazuva akasarudzwa esvondo kutanga muna Zvita 2021. SWISS ichashanda nendege dzinosvika ina vhiki kuenda kuJFK kubva Zvita 14, 2021.
United Airlines yakazivisawo kuti sevhisi yayo pakati peGeneva Airport neNewark Liberty International Airport (EWR) ichatangazve muna Mbudzi 1, 2021, nendege ina pasvondo.
Ndege mbiri idzi ndedze codeshare vanobatana uye nhengo dze Star Alliance.
Kune pent-up kudiwa kwekufamba kuenda kuSwitzerland uye idzi inhau dzinogamuchirwa kune vese vafambi nevafambi vebhizinesi. Izvi zvinonyanya kuitika kune avo vanotsvaga nendege dzakananga kuGeneva uye kuna Vaud, iyo koni inotaura chiFrench kumahombekombe kweLake Geneva. Sarudzo yeSWISS neUnited yakakosha kune bhizinesi nekushanya muguta guru reLausanne, imba yeOlympic Museum, pamwe nemumaguta emakungwa akadai seMontreux neVevey. Nguva yechiziviso iyi yakanakirawo kutanga kwemwaka wechimakumi maviri nenomwe kumatenga ezvitoro munguva dzechando, kusanganisira maVillars, Les Diablerets neLeysin, pamwe neGlacier 2021.
Nzira iri pakati peGeneva neNew York ndiyo imwe yenzvimbo dzakabatana nenhandare yendege. Yakatangwa ichangopera hondo muna1947 kubatanidza nzvimbo mbiri dzeUnited Nations uye yakashanda sebhiriji repamazano. Nhasi, Geneva kune masangano anopfuura makumi matatu ehurumende uye anoda kusvika mazana mana NGOs. Pamberi peCOVID-30 denda, dunhu rakaita misangano nemisangano yepasirese inodarika zviuru zvitatu pagore. MaAmerican multinationals mazhinji ane matunhu makuru kuSwitzerland inotaura chiFrench uye nhandare iyi hukama hwakakosha pakati peCanton yeVaud neUnited States kune ese mabhizinesi uye mafaro ekuzorora.